मंसिर ४ गते शनिवार – यस्तो छ तपाईको भाग्य! आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस् – Dailny NpNews
रातोपुल : धोविखोलामा एक पुरुषको शव फेला, थप अनुसन्धान जारी
बिश्वकपको लागी ५ महिना कामदारले कतार छोड्नुपर्ने, कतारले ५ महिनाको तलब दिने
उडेको केही बेरमै यात्रुको आकासमै मृत्यु भएपछी ……
रोमानियामा महिला पुरुष हरुलाई रोजगारको अवसर ! मासिक तलव कति ?
मंसिर ४ गते शनिवार – यस्तो छ तपाईको भाग्य! आफ्नो राशिफल हेर्नुहोस्
प्रकाशित मिति: शनिबार, मंसिर ०४, २०७८ समय: ८:५२:४८
मेष – आजको दिन उपासना र प्रार्थनाको लागि एक राम्रो दिन हुनेछ । दान दिएमा तपाईलाई सन्तुष्ट महसुस हुन्छ । तपाईंको काममा ढिलाई हुन सक्छ । काममा धेरै व्यस्थ रहन सक्ने सम्भावना छ । तपाईं आफ्नो बच्चाको बारेमा चिन्ता गर्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईं घरमा प्रियजनसँग समय बिताउन सक्नुहुन्छ ।
वृष – तपाईंले फिल्महरू हेरेर र संगीत सुनेर आफैँ आनन्द लिनुपर्दछ । यसले तपाईंलाई बढी आराम र उत्साहित बनाउँदछ । तपाईले आफ्नो काम पूरा गर्न बढी ध्यान दिन सक्नुहुन्छ किनकि त्यहाँ त्रुटिहरू हुने सम्भावनाहरू छन् । तपाईंले आफ्नो पार्टनरसँग कुराकानी गर्नु अघि शब्दहरुमा ध्यान दिनुपर्छ ।
मिथुन – दिनले परिवर्तन ल्याउनेछ । तपाईंले सजिलै परिस्थितिसँग सामना गर्न सक्नुहुनेछ । राम्रो परिणाम ईमानदारीसाथ प्राप्त गर्न सकिन्छ । तपाईं आफ्नो कामको बारे यात्रा को लागी जान सक्नुहुन्छ । यसले तपाईलाई व्यस्त राख्छ । दिउसो परिवारका लािग समय ब्यतित गर्दा उत्तम हुनेछ ।
कर्कट – तपाइँको गतिविधिहरू पूरा गर्न तपाइँले बुद्धिमत्ता लागू गर्नुपर्छ । निकै त ना व भोग्नुपर्ने सम्भावना छ । तपाईको सहकर्मीहरूको राम्रो कामको परिणामले गर्दा तपाईंलाई केही समस्या निम्त्याउन सक्छ । तपाईंको पार्टनरसँग राम्रो अवस्था कायम गर्न तपाईंले आफ्नो पार्टनरको आवश्यकताहरूको बारेमा थाहापाउनु जरुरी छ ।
सिंह – तपाईले दिनको लागि मिश्रित नतीजा अनुभव गर्नुहुनेछ । कुनै पनि गतिविधिमा संलग्न हुनु भन्दा पहिले तपाईको योजना राम्रो हुनु पर्छ । तपाई आफैलाई दिनको लागि व्यस्त राख्नु हुनेछ किनकि कार्य तपाईका लागि चुनौतीपूर्ण हुनसक्छ । तपाईले आफ्ना जिम्मेवारीहरू बुद्धिमानीपूर्वक पूरा गर्ने प्रयास गर्नुहुनेछ ।
कन्या – तपाईको आमाको समर्थनमा तपाईले सान्त्वना र खुशी पाउनुहुनेछ । तपाईंले दिनको लागि कडा मेहनत गर्नुपर्ने हुनसक्छ । तपाईले धेरै काम गर्नुपर्छ तर ती कार्यहरू सम्पन्न गर्न ढिलाई हुन सक्छ । आजको दिन प्रेम र विवाहको लागि राम्रो हुँदैन । सामान्य सन्तुष्टि अनुपस्थित हुनेछ । तपाईको आमाको स्वास्थ्यको लागि खर्च गरिन्छ ।
तुला – दिनले तपाईंलाई मिश्रित परिणाम दिनेछ । उत्तराधिकार सम्भव हुनेछ । तपाइँ तपाइँको गतिविधिहरु ह्यान्डल गर्नको लागी थोरै सावधान हुन आवश्यक पर्दछ । तपाईको कडा परिश्रमले गर्दा करियरको विकास हुन सक्ने सम्भावना छ । तपाईंको काममा साना अवरोधहरू हुन सक्छन् ।
वृश्चिक – यो दिन तपाईले ठूला निर्णय गर्नको लागि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ । तपाईं सामाजिक घटनाहरूमा भाग लिन सक्नुहुन्छ । काममा तपाईंको लचिलो संचारको माध्यमबाट, तपाईं सफल परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुनेछ । तपाईं आफ्नो कामका लागि यात्रामा जान सक्नुहुनेछ ।
धनु – तपाईले यात्रा गर्नुपर्ने हुन्छ । केहि चिन्ताको विषयहरूले तपाईंलाई पिरोल्न सक्छन् । तपाईले कार्यमा अवरोधहरू देख्न सक्नुहुन्छ । आजको भाग्यले तपाईको कामबाट राम्रो परिणाम दिँदैन । ठूलाबडाहरूसँग तपाईको केही मतभेद हुन सक्छ । चिसो समस्या र पाचन समस्याहरू हुन सक्छन् ।
मकर – महत्वपूर्ण निर्णयहरू लिनको लागि यो आदर्श दिन होइन । तपाईको लागि ध्यान र योग एकदम लाभदायक हुनेछ । आजको दिन तपाईको रोजगारमा प्रगति देख्न सकिने सम्भावना छ । जोडि बिच कम समझ हुनसक्छ । तपाईंले आफ्नो प्रियजनहरूसँग बढी समय बिताउन कोशिस गर्नुपर्छ ।
कुम्भ – तपाईं उपयोगी निर्णयहरू लिन सक्नुहुनेछ जसले गर्दा तपाईंको कार्य सजिलै सम्पन्न हुन्छ । संतोष तपाईको लागि सामान्य रूपमा उपस्थित हुन्छन् ।
आजको दिनले तपाईको काममा राम्रो नतीजा कमाउँछ । तपाईं आफ्नो वरिष्ठको प्रशंसा कमाउन सक्षम हुनुहुनेछ । परिवारमा सद्भाव कायम हुनेछ ।
मीन – आजको दिन तपाईले आफ्नो पक्षमा नतिजा ल्याउन अधिकतम प्रयास गर्नुपर्दछ । तपाईले नयाँ अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने सम्भावना छ । तपाईंले आफ्नो कार्यहरू कार्यान्वयन गर्दा तपाईँमा अधिक शक्ति र अठोट हुनेछ । तपाईको पार्टनरसँग राम्रो सम्बन्ध कायम हुनेछ ।
७० पटक हेरिएको
सपिङ मलको अफर: २२ रुपैयाँमा छानी-छानी गर्लफ्रेण्ड
यी ५ रोग जरैदेखि निको पार्न खानुहोस् काँचो पनिर, आफैं देख्नुहुनेछ चमत्कार ! सबैले जानीराखौं
मलेसियाबाट आयो दुखद् खबर , कामदारलाई सुरक्षित रहन आग्रह !
१ करोड ८० लाखमा बनेको सडक उद्घाटनका दिन सडकमै नरिवल फुटाउन खोज्दा सडक फुट्यो तर नरिवल फुटेन !